Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo si adag uga jawaab celiyey weerarkii ay kooxda Man United ku qaadeen Jose Mourinho & Frank Lampard – Gool FM
(Manchester) 18 Luulyo 2020. Macallinka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa si caro leh uga jawaabay celiyey weerarkii ay labada tababare ee Jose Mourinho iyo Frank Lampard ku qaadeen kooxdiisa.
Ole waxa uu si adag uga jawaab celiyey hadalladii soo baxay ee sheegayey in Kooxda Man United ay kooxaha kale kaga nasiib badan yihiin dhanka aaladda VAR, isla amrkaana ay ku faa’iideen go’aannada VAR, waxaana uu xitaa sheegay inuu ka cawdo garsoore xumo.
Waxa ay noqotay Red Devils kooxda ugu badan ee goolal laga dhaliyey ay diidday aalladda VAR kal ciyaareedkan horyaalka Premier League, sidoo kalena waa kooxda ugu badan ee gool ku laad loo dhigay.
Kulankii ugu dambeeyey ee Man United ay guusha ka gaartay Crystal Palace, kooxda uu hoggaamiyo macallin Ole waxa ay ka badbaadday in rigoore laga dhigo kaddib markii uu Victor Lindelof qalad ku galay Wilfried Zaha, sidoo sidoo kale gool uu Palace u dhaliyey Andre Ayew loo diiday garab dhaaf ama offside.
Macallinka kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa su’aan geliyey go’aannada hooseeya ee ay sameysay VAR oo ay ku faa’iidday xilli ciyaareedkan kooxda Manchester United, halka macallinkii hore ee Man Utd oo haatan hoggaamiya Tottenham ee Jose Mourinho uu sheegay in Red Devils uu nasiibku saaciday iyagoo u tartamaya afarta sare.
Yeelkeede, macallin Solskjaer ayaa gabi ahaanba iska diiday soo jeedintaas, waxaana uu sheegay in Man Utd aysan ku faa’iidin aaladda VAR in ka badan inta ay ku faa’iideen kooxaha kale sida uu hadalka u dhigay.
Solskjaer oo arrintaas ka hadlayeyna waxa uu yiri: “Meeqa saacadood ayaan haysannaa?, waxaan fariisan karaa halkaan saacado si aan uga hadlo arrintaan.
“Waxa ay u muuqataa inuu jiro olole, waxaana ay u eg tahay in dadku ay doonayaan inay saameyn ku yeeshaan go’aannada garsoorayaasha.
“Waxaan maqlaa dadka oo nasiib ka hadlaya, iyagoo sheeganaya inaan ka nasiib badannahay kooxaha kale, balse haddii aad eegto xaqiiqooyinka, haddii aad aad offside tahay, waxaad tahay offside, taasi waa ay caddahay.
“Aan ka hadalno casaankii ay aheyd in la siiyo Oriol Romeu markii uu ku dhawaaday inuu cuuryaan ka dhigo Mason Greenwood, waxay ahayd in casaan la siiyo, malaha taas ayaa ina caawin laheyd.
“Aan ka hadalno markii ay aheyd Mark Noble in casaan la siiyo, iyadoo ay guuldarro naga soo gaartay West Ham, laakiin waxaan ka hadlaynaa go’aannada sax ah ee la sameeyay, markii Man United gool laga dhaliyay ee dib loo saxay.
“Si kastaba ha ahaatee, aniga ayay ahayd inaan cabasho ka muujiyo go’aannada qaldan ee ay nagula kaceen garsoorayaasha” ayuu macallin Ole oo carreysan hadalkiisa ku soo gabagabeeyey.